Juan José Millás anodhinda bhuku idzva reSeix Barral imba yekutsikisa | Zvazvino Zvinyorwa
Iye munyori weValencian Juan Jose Millás inodhinda bhuku idzva, kunyanya rinotevera 16 yaMay nemuparidzi Nhanhatu Barral. Ini pachangu, ndinowanzo farira mabhuku aMillás nekuti anokurumidza kuverenga, anonakidza, uye sezvo iwo ari mashoma mabhuku (mamwe acho), iyi nyowani inongotaridza Mapeji 112, hadzirebe zvakanyanya kana kurema.
Musoro waro "Nyaya yangu yechokwadi" inoratidza zvishoma kuti zvarinotaura mukati inyaya yechokwadi mushure mekunyepa kana kuvanda. Asi kana iwe uchida kuziva kuti chii chaizvo icho chiri, chirevo chayo uye maonero akakodzera kumapepanhau etsika nevamwe vanyori, ramba uchiverenga zvishoma zvishoma pasi. Vhura Zvazvino Zvinyorwa, pamwe isu tine mukana wekuita ongororo yazvo. Kana zviri pakupedzisira kudaro, isu tichazviburitsa pano sechimwe chinyorwa.
Zvinyorwa zve "Nyaya yangu yechokwadi"
Iye murondedzeri we «Nyaya yangu yechokwadi » iye ane makore gumi nemaviri ekuyaruka senge chero mumwe (mukuru hunhu), nekutya kwake, kusagadzikana uye zvishuwo zvezviitiko zvitsva. Rimwe zuva, achidzoka kumba achibva kuchikoro, anokanda machena pazambuko uye anokonzeresa tsaona yemumugwagwa inouraya mhuri yese. Irene chete ndiye akaponeswa, musikana wezera rake, akaremara. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, mhosva inoumbika muhunhu hwake hwekuyaruka uye protagonist anowana muchiitiko ichi chematsotsi (chakashandurwa kuita chakavanzika chake chikuru) uye mukushushikana kwake uye rudo rwake kuna Irene ndiyo chete nzira yekubuda mumamiriro emhuri ari kupunzika apo vabereki vake kurambana.
Izvo zvakanyorwa pamwe ne kubata kwega cheumwe neumwe wemabhuku aMillás neake quirky pfungwa yekuseka. Bhuku rekuziva kuti mumwe nemumwe wedu anogona kutakura mutoro mukuru muhupenyu hwedu husina kana munhu anofungidzira.
Izvi ndizvo zvimwe zvekushoropodza nemafungiro atakanzwa takananga kubhuku idzva rakanyorwa naMillás:
«Kupinza uye kufungidzira ... Conjugate izwi uye kutarisa kuti ujekese zvakapetwa zvakapetwa ezvechokwadi». (Ana Rodriguez Fisher, Babelia).
"Kunyorwa kwaJuan José Millás, Buster Keaton wekunyora kwedu, kwakasarudzika uye hakuenzanisike." (JA Masoliver Ródenas, Tsika / s, La Vanguardia).
"Millás ane chimwe chinhu cheKafka yekuSpain ... Paanotaura nezvemhuri, mhuri yake, mhuri, zvinoita sekunge akadurura kapu yaProust nemusoro wemagetsi". (Cesar Casal, Izwi raGalicia).
Su mutengo kutengeswa kuchave 9,95 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Juan José Millás anoburitsa bhuku idzva
Kunyangwe iye asingazive, nekuda kwaJuan José Millás, anotanga kuverenga.
Mumwe wevanyori vanonyanya kugaya uye izvo zvinoita kuti uzvione uchizviratidza mumabhuku ake.